ဇာနည် ● မန္တလေး | MoeMaKa Burmese News & Media
သူ့ရဲ့ “မန္တလေး” ကဗျာကို
“သီပေါနဲ့ စုဖုရားလတ်” ရယ်…
ဆယ်နှစ်သား “မောင်လွမ်း” လေးရယ်…
ကြယ်ရောင်တွေ တိတ်တဆိတ်နဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ ကျုံးရေပြင်ရယ်….
“မြင်းခွာတချက်ပေါက်ရင် မီးဟုန်တောက်စေရမယ်”.. ဆိုတဲ့
အင်းလျားကျောင်းသူ”မအမာ” (အမေလူထုဒေါ်အမာ) ရယ်….
တောင်သာဇဂျမ်း ရွာသား “ဗဂျမ်း” (ဆရာတင်မိုးရယ်)…
“မြန်မာစာပေ ဘာလဲ ဘယ်လဲ”ဆိုတဲ့
“The light of Asia” ကို
“ရှယ်လီ” တို့ “ဂျွန်ကိ” တို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့..
ဆရာကြီး ကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်) ရယ်…
“စနေစာပေဝိုင်းနဲ့ “ဆရာဦးဝင်းတင်” ရယ်
ဆရာကြီး ဦးချမ်းမြ (မြကေတု) ရယ်…..
“ဗော်လဂါမှ ဂင်္ဂါ” ရေးခဲ့တဲ့
“What Buddha’s taught”
“ဆရာကြီး ဦးကိုကိုလေး” (မောင်ဇေယျာ) ရယ်…
“သမိုင်းသင်တာ မ အအောင်” ဆိုခဲ့တဲ့
ဓားထက်တဲ့ဗီလိန် ရနောင်မောင်မောင်တုတ်… တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရယ်…..”
ဆရာမြ (ဆရာကြီးမြသန်းတင့်) ရယ်…
“ရွှေပြည် ဦးဘတင်” ရယ်
စာပေ ပန်းချီ ဂီတ ရုပ်ရှင် စွယ်စုံရပညာရှင်…
အာအက်အေ ဦးဇော်ဝိတ်(ဆရာဦးဝင်းဖေ) ရယ်….
သင်္ကြန်မိုးဖန်တီးရှင် ဆ “ပါပါကြီး”
ဇာတ်သမားပြန်ရင် မှတ်သားစရာကျန်ရမယ်” ဆိုတဲ့
“ဦေးပါစံ…. ဦးသိန်းဆု… ဦးဟန်ညွန့်” တို့ရယ်….
“ကိုငြိမ်းချမ်း” (ညီပုလေး) တို့ရယ်….
ကိုမှိုင်း (မောင်းမှိုင်းလွင်အင်းဝ) ရယ်….
“ဂဠုန်နီ ဦးကာဝိဒ” ရယ်..
သူငယ်ချင်း “ထွန်းအောင်ကျော်” ရယ်…
ညီလေးဗိုလ်စံ (စံညိမ်းဦး) ရယ်…
“ကာဠုဒါယီ” ရဲ့ ချီးမွမ်းခန်းတွေနဲ့
တပိုဒ်ပြီး တပိုဒ် ရောက်လာခဲ့ချေပေါ့ …….။ ။